Howlihii Baarlamaannada iyo dhacdooyinkii 2017 qaarkood – Kalfadhi
Sanadkan dhamaadka ah ee 2017 wuxuu Soomaalida u billowday iyadoo dalka ay ka dhaceen doorashooyin. Xildhibaannada Goloha Shacabka iyo Aqalka Sare oo qaarkood la doortay, kuwo kalena ay dhiman yihiin. Wuxuu ahaa sanad la kowsaday socoshada dhaqdhaqaaqyada iyo ololeyaasha murashaxiinta kuraasta baarlamaanka iyo madaxtooyada oo ka socday Muqdisho iyo xarumaha maamul-goboleedyada.
Sidoo kale waxaa dalka soo maray dhacdooyin waaweyn oo isugu jira kuwo siyaasadda la xiriira, dagaallo dhacay, qaraxyo, mooshinno, madax is casishay iyo kuwo kuraasta ku dagaallamay intaba.
Bishii ugu horreysay ee Janaayo, waxaa la soo gabagabeeyay doorashadii dadbaneyd ee ka socotay xarumaha maamul-goboleedyadda iyo Muqdisho. Xildhibaan kasta waxaa soo doortay ergo ka kooban 51 qof. Isla bishaas ayaana la waqtiyeeyay doorashada madaxtooyada iyo meeshii lagu qaban lahaa.
Dhinaca Galmudug, 10-kii Janaayo, 54 mudane ayaa mooshin xilka uga qaaday madaxweynihii maamulkaas Cabdikariim Xuseen Guuleed oo markaas ku sugnaa Muqdisho.
Maalintii siddeedaad ee Febaraayo waxaa xerada Afisyooni ee Muqdisho ka dhacday doorashada madaxtinnimo. Xildhibaannada labada aqal ee baarlamaanka ayaa doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wuxuu wareeggii u dambeeyay ka guuleystay madaxweynihii ka horreeyay Xasan Sheekh Maxamuud.
Isla bishaas 23-dii madaxweyne Farmaajo ayaa raysul wasaare u magacaabay Xasan Cali Khayre. Waa maalin kaddib caleemo saarkii madaxweynaha.
Koowdii Maarso, raysul wasaare Kheyre ayaa helay codka kalsoonida ee Baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa u codeeyay dhammaan 231-kii xildhibaan ee maalintaas joogtay Golaha.
Isla bishaas 21-dii wuxuu magacaabay xukuumaddiisa oo ka kooban 26 wasiir. Baarlamaanka ayaana codka kalsoonida siiyay siddeed maalmood kaddib.
Xildhibaannada baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa saddexdii bishaas madaxweyne u doortay Axmed Ducaale Geelle (Xaaf).
Afartii bisha Wasiirkii Howlaha Guud iyo Dib-u-dhiska ee Xukuumadda Soomaaliya, Cabbaas Sheekh Cabdullaahi Siraaji oo sidoo kale ahaa mudane ka tirsan Golaha Shacabka ayaa lagu dilay Muqdisho. Wuxuu ahaa wasiirkii ugu da’ yaraa xukuumadda (31 jir). Askari ka tirsan ciidanka dowladda ayaa dilkiisa loo xiray.
Golaha Shacabka ayaa 23-kii bisha diiday xukun ay maxkamadda sare soo saartay oo sheegayay in dib loogu noqdo doorashada 8 kursi.
Baarlamaanka ayaa u yeeray wasiirka dastuurka, Cabdiraxmaan Xoosh Jabriil si ay wax uga waydiiyaan sharciyada uu u cuskaday ka hor imaanshaha go’aanka baarlamaanka. Bartiisa Twitter ayuu ku soo qoray qoraal uu uga soo horjeestay go’aankii baarlamaanka uu ku diiday xukunka maxkamadda. Inkastoo Golaha Shacabka uu wasiirka u yeeray 28-kii bisha, haddana kulankaas marnaba ma dhicin.
Lixdii bisha Golaha Shacabka ee federaalka ah ayaa ansixiyay miisaaniyaddii 2017 ee dowladda.
Sagaalkii Agoosto, Golaha Shacabka ayaa ansixiyay sharciga Isgaarsiinta.
Shir ay 14-kii bishaas yeesheen xildhibaanno gaaraya 76 oo ka tirsan maamulka HirShabeelle ayaa xilkii ka qaaday madaxweynihii maamulkaas Cali Cabdullaahi Cosoble, oo ay ku eedeeyeen xil-gudasho la’aan.
Baarlamaanka maamulka HirShabeelle ayaa 16-kii bisha madaxweyne u doortay Maxamed Cabdi Waare.
Xildhibaanno ka tirsan maamulka Galmudug oo xilli habeen ah shir ku yeeshay magaalada Cadaado, 27-kii bisha ayaa sheegay inay xilkii ka qaadeen madaxweynaha maamulkaas Axmed Ducaale Geelle. Waxaa tiradooda lagu sheegay 52 mudane. Arrintaas waxay horseedday khilaaf soo kala dhex galay madaxweyne Galmudug iyo guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka oo isku dhinac ah, iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka oo isku dhinac ah. Khilaafkaas wuxuu sababay inuu muddo hakad ku yimaado howlihii xafiisyada maamulka.
Golaha Shacabka ayaa 14-kii bisha ansixiyay heshiiska is-dhaafsiga maxaabiista ee Soomaaliya iyo Hindiyal.
Siddeed iyo tobankii bishaas Golaha Shacabka ee federaalka ah ayaa sharci-darro ku tilmaamay go’aankii ay xukuumaddu bishii Agoosto ku dhiibtay muwaadin lagu magacaabo Cabdikariim Sheekh Muuse (Qalbidhagax). Ninkan oo la sheegay inuu ka mid ahaa madaxda jabhadda ONLF ee Itoobiya la dagaallanta ayaa lagu wareejiyay dowladda Itoobiya. Kiiskiisa wuxuu ka mid ahaa waxyaabihii loogu hadal-heynta badnaa sanadkan. Baarlamaanka wuxuu sheegay in aysan ONLF ahayn argagixiso. Xukuumadda ayaa horay jabhaddaas ugu tilmaantay argagixiso.
Golaha Shacabka ayaa 13-kii bishan ansixiyay miisaaniyadda ay dowladda ku shaqeyn doonto 2018.
Kalfadhiga labaad ee baarlamaanka ayaa soo xirmay 16-kii bisha.
Xasan Maxamed Aweys